Ungalokothi Sweat Lodge - I-Airbnb
Ungalokothi Sweat Lodge
Inqolobane ibungazwe ngu-Logan
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Logan izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Attention Sledders! Lena indawo oyidingayo. Okusanda kulungiswa kabusha 3,500 sq. ft isikhala ngokwezifiso. Indawo yokudlela yangaphambili isiguqulwe ngokuphelele yaba indawo eyingqayizivele, eqashisayo ngamakamelo amahlanu okuvakasha. Kusha phezulu kuya phansi. Isakhiwo sonke sashiswa futhi sakhiwa kabusha kusukela phansi kuya phezulu. Kungezwe indawo ephezulu engamamitha-skwele angu-1,100 ene-private master suite. Iphelele ngekhishi elikhulu, igumbi lodaka elibanzi lazo zonke izinto zakho ezisetshenziswayo, nokuzijabulisa okuningi: I-Big Buck Hunter yamahhala kanye netafula lokubhukuda. Yiqashe manje!
Izinga eliphansi linendawo enkulu yokuhlala egcwele ukuzijabulisa, ukukhanya komugqa, amabhiliyade nemidlalo yamavidiyo. Le ndawo yomndeni ivulekele ikhishi elisebenziseka kalula, elivulekile ngokwanele ukuba amaqembu amakhulu apheke futhi adle ndawonye. Ezingeni elikhulu uzothola namakamelo okulala amane, amagumbi okugeza amathathu agcwele, igumbi lodaka kanye nelondolo ukuze kube lula kuwe. Isitezi esisanda kufakwa esitezi esiphezulu sinekamelo lokulala elikhulu elizimele elinegumbi lokugezela le-en suite, kanye nebha ye-whisky ephindwe kabili yangokwezifiso kanye nendawo yokuhlangana enombono omangalisayo wezintaba.
Jabulela inkomishi yekhofi noma ingilazi yewayini ngaphambili ngenkathi ulalele ukuhlokoma okuthambile komfula i-Wind. Dlala umdlalo wamabhiliyade ngaphansi kokukhanya kwemizwa enemibala. Pheka ukudla kwakho okuthandayo kuleli khishi langokwezifiso. Bamba umhlangano noma dlala imidlalo etafuleni ngenkathi ubuka izilwane zasendle. Jabulela imuvi yakho eyintandokazi egumbini lokuphumula elinezihlalo ezinkulu, ezithokomele kanye nosofa. Thola ukulala kwekhwalithi kunoma yimiphi imibhede eyisikhombisa, emisha sha okufanele siyinikeze.
Uma ungaphumuli endaweni yethu ephumulele, sebenzisa imisebenzi engapheli indawo ezungezile engayinikeza. Indawo yethu yokubalekela ingatholakala emaphethelweni e-Dubois, etholakala kalula nje imizuzu embalwa ukusuka edolobheni lethu elimangalisayo, lapho ungabheka khona amagalari obuciko endawo, iminyuziyamu, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela. Edolobheni ungathola nenkundla yegalofu enhle, i-rodeo yamasonto onke (ezinyangeni zasehlobo), nokuzijabulisa okubukhoma. Uma uzizwa unamandla, indawo engaphandle ifaka ukudoba kwezindiza ezisezingeni lomhlaba, ukugibela amahhashi, ukuzingela, ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela izintaba, ukuhamba eqhweni, ukushushuluza eqhweni, ukushushuluza, nokuningi. Lena eminye yemisebenzi embalwa engatholakala emagcekeni ethu. Entshonalanga ngehora, uzothola iGrand Teton National Park kanye nomnyango oseningizimu weYellowstone National Park, kanye nedolobha laseJackson. I-Riverton ilele cishe ihora empumalanga, enyakatho unezintaba ezimangalisayo ze-Absaroka, futhi eningizimu uMfula i-Wind. Kungakhathaliseki ukuthi uya ngaphi, uhambo luyavama.
Umsingathi uhlala ezindaweni ezi-2 uma udinga okuthile. Ufuna ukuzijabulisa noma ukufunda mayelana nezindawo ezimbalwa "zasendaweni" ongazivakashela endaweni? Ake ungazise. Ngiyajabula ukukuqondisa endleleni efanele.